देशको वर्तमान परिस्थितिले हामीलाई कार्यगत एकताका लागि एक वनाएको हो
नेपाली इसाई समुदायलाई राष्ट्रियरुपमा अगुवाइ गर्दै आए नेपाली इसाईवृतका तिन वटा संस्थाहरु राष्ट्रिय ख्रीष्टियान महासंघ नेपाल (एफएनसिएन), नेपाल ख्रीष्टिय समाज (एनसिएस) र नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगति (एनसिएफ नेपाल)का पदाधीकारीहरुवीच यसै साता राजधानीमा त्रिपक्षिय वार्ता सम्पन्न भएको छ । वार्ताले उनीहरुवीच कार्यगत एकता गर्ने सहमती भएको छ । यसै विषयमा सम्वन्धित रहेर ख्रीष्टियान महासंघ नेपालका महासचिव सि.वि.गहतराजसँग तुरहीका लागि साउन १० गते राती कुमारसिंह विष्टले गर्नुभएको वार्ताको सम्पादित अंशः
नेपाली ख्रीष्टियान समुदायमा एकताको लागि धेरै पहिलेदेखि नै आवाज उठी रहेको सुनिन्छ तर अहिले आएर एफएनसिएन, एनसिएस नेपाल र एनसिएफ नेपालवीच कार्यगत एकता गर्ने बाटो कसरी खुल्यो ?
यस्तो खालको सहमती र एकताका लागि पहिले पनि हाम्रो समुदायमा प्रयास नभएका होइनन् तर विविध कारणवस त्यतीखेर संभव हुन सकेन होला । तर आज हामी एउटै टेवलमा आएर इसाईहरुका साझा सवालका विषयमा तिनै वटा संस्थाहरु एक भएर जानुपर्ने विकल्प नरहेको हुँदा कार्यगत एकताका लागि हामी सहमतीमा पुगेको हौं । यस्को मतलव हामीमा यो भन्दा पहिले एक थिएनौ भन्न पनि खोजेको होइन । हामी एउटै पिता, एउटै पुत्र र एउटै पवित्रआत्मा मान्ने इसाई हौं । हामी जुन संस्थाका भएपनि धार्मिकतवरले हामी एक हौं । लामो समयदेखि नेपाली इसाईहरुले चाहेको पनि यही थियो । पछिल्लो समयमा राज्यले नेपाली इसाईहरुलाई गरेको दमनकारी व्यवहारले पनि हामीहरु वीच कार्यगतरुपमा एक हुने वातावरण सृजना गरेको हो ।
यस्तो खालको सहमती र एकताका लागि पहिला पनि पहल हुँदा किन सहमती हुन सकेन त्यसोभए ?
विगतमा यस्तो खालको कोशिष् र पहल नभएको होइन । सहमती र एकताका लागि महासंघले पनि त्यो खालको पहल नगरेको होइन । सवै कुराको समय छ भने जस्तै । सायद अहिले नै उहाँको समय रहेछ जसका कारण हामी कार्यगत एकताका लागि सहमतीमा पुगेका छौ । यद्दपि हामी तिन वटै संस्थाहरु आआफ्नै संस्थागत उद्देश्यकासाथमा नेपाली इसाईहरुको पक्षमा काम गरीरहेका थियौ । तर फरक यती मात्र थियो की अहिलेसम्म हामीवीचमा कार्यगत एकता भएको थिएन । पछिल्लो समय राज्यबाट नेपाली इसाईहरुलाई जुन खालको दमनको व्यवहार गरियो यी र यस्तै कारणले अब पनि हामी वीच कार्यगत एकता नभएर जानुको विकल्प छैन ।
त्यसो भए पछिल्ला दिनमा राज्यले इसाईहरुलाई गरेको विभेदकारी व्यवहारले नै तपाईहरुलाई एक वनाउने वातावरण सृजना गरि दियो है ?
यथार्थ यही नै यही नै हो । संविधानमा नै देश धर्म निरपेक्ष भइ सकेपछि अब त इसाईहरुको पनि पहिचान हुनेभयो भन्ने आशा भयो हामीलाई । तर अभ्यासमा सोचे भन्दा ठिक विवरित भयो । धर्मको नाममा कहिले इसाईहरुलाई राहत वितरणमा धर्म प्रचारसँग जोडियो त, कहिले बालगृहमा धर्म प्रचार भयो भनेर इसाईहरुमाथि गैर कानुनीतवरले आक्रमण गरियो । राज्य योजनावद्ध ढंगबाट इसाई समुदायप्रति आक्रमणमा उत्रिए जस्तो भयो । ख्रीष्टियान एनजिओ र आइएनजिओहरुलाई नविकरण र कार्यक्रम योजना स्वीकृत गर्नमा रोक लगाउने सरकारको यो दमनकारी व्यवहारले पनि अब हामी नेपालका इसाईहरु एक भएर वलियो हुने वातावरण सृजना भयो ।
कस्तो खालको कार्यगत एकताको सहमती भएको हो ?
संस्थागत हिसावमा हामी तिनै संस्थाको आआफ्नो उद्देश्य र काम कर्तव्य छ । यसमा हामी आआफना् तवरले काम गर्छौ यसमा हामी स्पष्ट छौ । तर समग्र नेपाली इसाईहरुको साझा विषयका सवालमा भने अब हामी नेपाली ख्रीष्टियानहरुको तर्फबाट एक आवाज (कमन भ्वाइस) लिएर अगाडि वढ्ने भन्ने कुरामा हामी एक भएका हौ । हाम्रो पहिलो चरणको त्रिपक्षिय वार्ताले हामी तिनवटै संस्थाको तिन–तिनजना प्रतिनिधित्व रहने गरि एक कार्यदल गठन गर्ने सहमती भएको छ । हामीले यही शुक्रबार १४ गते उक्त कार्यदल गठन गर्नेछौ । यो कार्यदलले नै भविष्यका दिनमा नेपाली इसाईहरुका पक्ष वा विपक्षमा भइपरि आउने काम कारवाहीमा नेपालका समग्र इसाईहरुका तर्फबाट राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व गर्ने छ । अनी १४ गते हुने त्रिपक्षिय छलफलपछि एक सल्लाहाकार समिति पनि गठन गर्ने विचार गरिरहेका छौ जुन समितिमा नेपाली इसाई समुदायका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरुको सहभागीता रहने छ ।
तपाईको कुरा सुन्दा त ढिलै भएपनि यस्तो खालको सहमती त हुनुपर्ने नै रहेछ नी है ?
यो त परमेश्वरको ईच्छा पनि त हो नी हामी सहमती र एकतामा आउनु । बाइबलले नै भन्छ, ‘दाजुभाइहरु एकापसमा मिलेर वस्नु कति मनोहर कुरा हो’ । नेपाली इसाई समुदायका तिन संस्थाहरु मात्र होइन अब त नेपालका सम्पूर्ण ठूलासाना मण्डलीहरु, सम्प्रदायहरु र संस्थाहरु एक हुनु आजको आवश्यकता हो । यसले हामी नेपाली इसाईहरुलाई झन वलियो वनाउँछ । देशको वर्तमान परिस्थितिले हामीलाई कार्यगत एकताका लागि एक वनाएको हो । एकले अर्कालाई सहयोग र समर्थन गरेर हामी हाम्रो लक्ष्यमा अवश्य पुग्ने छौ र नेपाली इसाई समुदाय र नेपाल सरकारलाई हामी असल म्यासेज दिनेछौ ।